COVID-19 ကာလမှာ အလုပ်တွေ ရပ်လိုက် ရလို့ ငို လိုက်၊ ရယ် လိုက်ဖြစ် ပြီး စိတ်ဓာတ် ကျခဲ့ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့် လာ တဲ့ ဖွေးဖွေး – Shwe Sar
COVID-19 ကာလမှာ အလုပ်တွေ ရပ်လိုက် ရလို့ ငို လိုက်၊ ရယ် လိုက်ဖြစ် ပြီး စိတ်ဓာတ် ကျခဲ့ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့် လာ တဲ့ ဖွေးဖွေး
Shwe Thit | August 1, 2020 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ဆောင်မင်သမီးချောဖွေးဖွေးကတော့ လက်ရှိ အကယ်ဒမီ ရွှေစင် ရုပ်ထု ၃ ဆု ပိုင်ရှင် ပရိသတ် အင်အားတောင့်တင်းစွာ နဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ရပ်တည်နေသူတစ်ဦးပါ။Covid 19 ကာလအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်အားလုံး ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နား ခဲ့ရတာကြောင့် ဖွေးဖွေးတစ်ယောက်လည်း အနားရနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးက Covid 19 ကာလမှာ Stay Home နေရင်း တစ်သက်လုံး ဒီလိုမျိုးကြီးပဲ ဖြစ်သွားတော့မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ငိုလိုက် ရယ်လိုက်ဖြစ်ကာ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့တာပါ။
“COVID-19 ကာလမှာ တစ်သက်လုံး ဒီ လိုမျိုး ဖြစ်သွားမလား လို့ စိတ်ပူပြီး စိတ်ဓာတ် ကျခဲ့ရတယ်။ ငို လိုက်၊ ရယ် လိုက် တောင် ဖြစ်သွားတယ်။အမေ စု Facebook အကောင့်ဖွင့် လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အမေစု ကို အားယူပြီး၊ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လောကကြီး အကြောင်း ကို ပိုလေ့လာဖို့ အချိန်ေ တွ ပိုရခဲ့ပါတယ်”လို့ ပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုယ့်အလုပ်ကကျတော့ Professinal ကရုပ်ရှင်လေ…. အဓိကက ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိမှရမှာပေါ့…..ပြီးရင် ကြော်ငြာတွေပေါ့…ဖွေးကကျတော့ Social Media တွေမှာ သိပ်တက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ…Live လွှင့်တာလည်း သိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး..ဖွေးကသရုပ်ဆောင်ဆိုတော့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ရတာကို ပိုပျော်တယ်… ဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်ကျမိတဲ့ အကြောင်းဖွင့်ဟလာခဲ့တာပါ။ တနည်းအားဖြင့်တော့ အရင်က မလုပ်ဖြစ်တာတွေလည်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး အခုတော့ အေးဆေးစွာဖြတ်ကျော်နိုင်နေပြီလို့ ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Stay Home ကာလမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေခဲ့ရတဲ့ဖွေးဖွေးရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။အားလုံးပဲ ကိုဗစ်ကြောင့် အမြန်ဆုံး လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
သရုပျဆောငျမငျသမီးခြောဖှေးဖှေးကတော့ လကျရှိ အကယျဒမီ ရှစေငျ ရုပျထု ၃ ဆု ပိုငျရှငျ ပရိသတျ အငျအားတောငျ့တငျးစှာ နဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈရပျတညျနသေူတဈဦးပါ။Covid 19 ကာလအတှငျးမှာ အနုပညာရှငျအားလုံး ရိုကျကူးရေးတှရေပျနား ခဲ့ရတာကွောငျ့ ဖှေးဖှေးတဈယောကျလညျး အနားရနခေဲ့ တာဖွဈပါတယျ။
ဖှေးဖှေးက Covid 19 ကာလမှာ Stay Home နရေငျး တဈသကျလုံး ဒီလိုမြိုးကွီးပဲ ဖွဈသှားတော့မလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ငိုလိုကျ ရယျလိုကျဖွဈကာ စိတျဓာတျကခြဲ့ရတယျလို့ဆိုလာခဲ့တာပါ။
“COVID-19 ကာလမှာ တဈသကျလုံး ဒီ လိုမြိုး ဖွဈသှားမလား လို့ စိတျပူပွီး စိတျဓာတျ ကခြဲ့ရတယျ။ ငို လိုကျ၊ ရယျ လိုကျ တောငျ ဖွဈသှားတယျ။အမေ စု Facebook အကောငျ့ဖှငျ့ လိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ အမစေု ကို အားယူပွီး၊ ပုံမှနျ ပွနျဖွဈအောငျ ပွနျကွိုးစားခဲ့တယျ။ လောကကွီး အကွောငျး ကို ပိုလလေ့ာဖို့ အခြိနျေ တှ ပိုရခဲ့ပါတယျ”လို့ ပွောကွားလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“ကိုယျ့အလုပျကကတြော့ Professinal ကရုပျရှငျလေ…. အဓိကက ရုပျရှငျရုံတှရှေိမှရမှာပေါ့…..ပွီးရငျ ကွျောငွာတှပေေါ့…ဖှေးကကတြော့ Social Media တှမှော သိပျတကျတဲ့လူမြိုးမဟုတျဘူးလေ…Live လှငျ့တာလညျး သိပျမလုပျဖွဈဘူး..ဖှေးကသရုပျဆောငျဆိုတော့ ရုပျရှငျ ရိုကျရတာကို ပိုပြျောတယျ… ဆိုတော့ စိတျဓာတျကမြိတဲ့ အကွောငျးဖှငျ့ဟလာခဲ့တာပါ။ တနညျးအားဖွငျ့တော့ အရငျက မလုပျဖွဈတာတှလေညျး လုပျဖွဈခဲ့တယျလို့ သိရပွီး အခုတော့ အေးဆေးစှာဖွတျကြျောနိုငျနပွေီလို့ ပွောလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ Stay Home ကာလမှာ ကိုဗဈ ၁၉ ကွောငျ့ စိတျဓာတျကနြခေဲ့ရတဲ့ဖှေးဖှေးရဲ့ အကွောငျးကို တငျဆကျပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ။အားလုံးပဲ ကိုဗဈကွောငျ့ အမွနျဆုံး လုပျငနျးတှပွေနျလညျအဆငျပွပေါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျနျော။
ယုန်လေး ကို We Stand With လုပ်ကြ တဲ့ အနုပညာရှင်များ (ရုပ်/သံ)
အရမ်းလှပပြီး အသ ည်းယား စရာ ဟန်ပန်လေးေ တွနဲ့ ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေ တဲ့ လုလုအောင်
အကျိုးအကြောင်း မသိပဲ လာဆဲရင်တော့ ဆဲတဲ့သူ အိမ်အထိ ပါးတက်ရိုက်မှာလို့ ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်း